Miyeey Real Madrid xiiseyneysaa Lionel Messi? Waxaa ka jawaabaya Toni Kroos – Gool FM
Miyeey Real Madrid xiiseyneysaa Lionel Messi? Waxaa ka jawaabaya Toni Kroos
(Barcelona) 08 Seb 2020. Xiddiga qadka dhexe kooxda Real Madrid ee Toni Kroos ayaa faallo ka bixiyay wararka xanta ah ee sheegayey suurtogalnimada uu Lionel Messi ku imaan karo garoonka Santiago Bernabeu.
Messi ayaa doonayay inuu ka dhaqaaqo kooxda Barcelona mudadii ugu dambeysay, balse muran xoogan kaddib Jimcihii la soo dhaafay ayuu go’aansaday inuu sii joogo garoonka Camp Nou xilli ciyaareedka cusub.
Wargeysyada qaar ayaa waxay sheegeen inay suurtogal tahay in Real Madrid ay ku fikireyso inay la saxiixato Messi, laakiin Toni Kroos ayaa aaminsan in arrintan ay tahay mideysan ogolaan doonin labada dhinac, ha ahaato Barcelona ama Los Blancos.
Haddaba wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa shaaca ka qaaday jawaabta uu ka bixiyay Toni Kroos, kaddib marka la weydiiyay suurtogalnima uu Messi ku imaan karo Real Madrid waxaana uu yiri:
“Uma maleynayo in Lionel Messi uu doonayo inuu yimaado halkan”.
Si kastaba ha noqotee, Kabtan Lionel Messi ayaa dib ugu soo laabtay tababarka kooxda Barcelona markii ugu horreysay, kaddib markii uu kooxda weydiistay inuu isaga tago.
Eto’o oo doortay xiddigii ugu fiicnaa uu kala garab ciyaaray Barcelona… (Ma ahan Messi mana ahan Ronaldinho)